lamba firakotra Time
Hanor Textile miorina ao Ningbo Shina, indrindra mpanamboatra sy fanondranana maro samihafa ny zazakely sy ny an-trano lamba lamba. Ny lamba dia ahitana tsipika vokatra bodofotsy zazakely, zazakely Bib, swaddle zazakely, zazakely washcloth, zazakely nisaron-tava lamba famaohana, lamba burp zazakely, zazakely diaper, zazakely sy ny zaza bathrobe akanjo. Koa izahay misahana ny volon'ondry bodofotsy, fandroana lamba famaohana, lamba famaohana amoron-dranomasina, olon-dehibe bathrobe, lafika, ondana fonony sy ny fandriana FANAOVANA TAKELABY.
Efa namorona raharaham-barotra tsara ny fifandraisana amin'ny mpanjifa na ao an-trano sy any ivelany. Ny manan-karena amin'ny fanondranana traikefa, avo kalitao ny vokatra, mifaninana vidin-javatra, ambony asa fanompoana sy amin'ny andro fanaterana, dia tsara fa afaka hihaona ny fepetra takiana ary mihoatra ny fanantenanao.
Isika miandrandra foana ny hanitatra ny mpanjifa fototra. Raha toa ianao ka liana na inona na inona ny andian-dahatsoratra, dia mifandraisa aminay Raha mila fanazavana fanampiny. Ny fahafaham-po no tanjona ny ezaka, misy fanadihadiana sy ny fanontaniana tsara ho tsara fanahy sy ny valinteny haingana miaraka amin'ny avo fahombiazana, fahatsoram-po.
Room 1215, Haiguang Building, No. 298, Zhongshan West Road, Ningbo, Sina.
Copyright 2018 Ningbo Yinzhou Hanor Textile Company Limited. Zo rehetra voatokana.